Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/azo.mg.p
Ohabolana Aza manao andriamanjaka azoko am-po. [Veyrières 1913 #193]
Ohabolana Azoko amy ny vavany, hoy ilay nanjono toho. [Cousins 1871 #725]
Ohabolana Azon' atody saron-droa ka sahiran-kevitra. [Rinara 1974 #831]
Ohabolana Hanao ahoana hianao ? azon’ ny haren-tsy manarana, ka mitafy lamba endrikendrehina. [Cousins 1871 #1019]
Ohabolana Izaho angaha azon' ialahy nividy laona no handoa izany volabe izany? [Veyrières 1913 #4866, Rinara 1974]
Ohabolana Nahoana hianao no manara-drafozana, ka hoy izy : Izay azoko aza mbola ho azy. [Rinara 1974]
Ohabolana Ny afon-dolo, afon' angatra, ka tsy azonao angatahina. [Rinara 1974 #2827]
Ohabolana Trandraka azon’ ny liana. [Samson 1965 #T125]